एसईईको नतिजा आज नआउने: अब कहिले आउछ रिजल्ट ? यस्तो भन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड...
असार ०६, २०७५ BNNTV
काठमाडौँ । बुधबार आउने भनेर प्रचार गरिएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई) को नतिजा आज नआउने भनेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा एसइईको नतिजा सार्वजनिक भयो भनेर समेत समाचार प्रकाशन हुन थालेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सो कुराको गलत भएको र नतिजा प्रकाशित गर्न अझै ५ /७ दिन लाग्न सक्ने बताएको छ ।
बोर्डले यसअघि बुधबारसम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी गरेको जानकारी दिएको थियो । यद्यपि, उसले कुनै प्रावधिक गडबडी नभएको खण्डमा मात्र प्रकाशन गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका प्रसाद रेग्मीका अनुसार अहिले सबै उत्तर पुस्तिकाको ‘इन्ट्री’ र ‘रुजु’ गर्ने काम धमाधम भइरहेकोले सो काम सकिन साथ नतिजा सार्वजनिक हुने छ। नतिजा सार्वजनिकका लागि उत्तरपुस्तिका ‘इन्ट्री र रुजु’ गर्ने काम भइरहेकाले त्यो काम सकेपछि मात्रै नतिजा सार्वनिक हुने बताए ।
नियन्त्रक रेग्मीले भने – ‘अहिले सबै उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गरी विद्यार्थीको नम्बर चढाउने र रुजू गर्ने काम चलिरहेको छ। सो काम सकिए लगत्तै बोर्ड बैठक बसेर नतिाजा सार्वजनिक गरिनेछ’। समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्डले काम गरिरहेपनि केही प्राविधिक समस्याका कारण केही दिन ढिला हुन गएको उनको भनाई रहेको छ ।
यसवर्षको परीक्षामा साधारण धारतर्फ चार लाख ८५ हजार ५८६ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । यस्तै प्राविधिक धारतर्फ ८ हजार ७०८ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । नतिजा ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार हुनेछ । एसइईको नतिजा बिगुल न्यूजको अफिसियल वेब साइटबाट पनि हेर्न सकिने छ।
प्रकाशित : बुधबार, असार ०६, २०७५११:४५
नेपालबाट हराएकी किशोरी भारतीय क्षेत्रमा मृत फेला !
हराएको हेलिकप्टर धादिङको सत्यदेवी जंगलमा ध्वस्त अवस्थामा भेटियो ! उद्धार भने हुन सकेन !
फिजी चुनावः बेनीमारामाको दललाई झिनो बहुमत !
यी हुन् विश्वका ५ शहर, जहाँ कपडा लगाउन मनाही छ
दिनदहाडै छुरा हानेर मनिट्रान्सफर लुटियो ! प्रहरी समयमा घटनास्थल नपुगेपछि स्थानीय आक्रोषित !
प्रदेश नं ३ सरकारको एक वर्षः यस्ता छन् उपलब्धि !